Vavaka ho an'i San Martín de Porres. ? Ho an'ny biby sy ny marary.
Vavaka ho an'i Saint Martin an'i Porres, dia fitaovam-piadiana mahery vaika eo am-pelatanan'ny olona mitazona finoana matanjaka sy salama. The vavaka San Martin de Porres Maneho ny famonjena amin'ny tranga ara-pitsaboana maro izy io ary mahakasika ny olona manana loko.
Fony mbola velona izy, dia nanampy ho an'ireo izay nidina hopitaly nanana olana ara-pahasalamana lehibe.
San Martín de Porres dia olo-malaza be mpitia indrindra any Amerika Atsimo noho ny fahagagana maro naseho azy taloha ela be talohan'ny nahavoriany azy.
1 Vavaka ho an'i Saint Martin de Porres Iza no Saint Martin de Porres?
2 Ny vavaka ho an'i San Martín de Porres ho an'ny biby
3 Vavaka ho an'i San Martín de Porres ho an'ny marary
3.1 Rahoviana aho no afaka mivavaka?
Vavaka ho an'i Saint Martin de Porres Iza no Saint Martin de Porres?
Teraka tao Lima izy, Peroa tamin'ny taona 1579, no lahimatoan'ny mpirahalahy roa, ny rainy Peroviana sy ny reniny izay vehivavy manana volo marefo teraka tany Panama.
Rehefa tsy eken'ny fianakavian-dreniny izy, dia navela tao amin'ny fonjam-panjakan'i Doña Isabel García, izay nipetraka tao San Lázaro, tanànan'ny olona miloko.
Tamin'ny mbola kely dia nanomboka niofana ho apotekera izy ary nanomboka teo dia nanomboka ny fianarany tany el tontolo Ny fanafody.
Nanomboka ny fanomanana ara-pivavahany izy tao amin'ny fivoriambe Dominikana Our Lady of the Rosary saingy nolavina tokoa izy noho ny feon'ny mulatto ny lokon'ny hoditra.
Na izany aza, nijanona ho matanjaka teo amin'ny fanaony i Martin, nanatrika vavaka tamin'ny maraina ary tsy nanao tsinontsinona ny asany rehetra, lasa ohatra ho an'ny hafa.
Ny fanomezam-pahasoavany ho fanasitranana dia hita ao amin'ny olombelona sy ny biby, ireo marary rehetra Martin nitondrana dia nahazo fanasitranana, amin'ny tranga maro, avy hatrany.
Izany dia nahatonga azy hahazo laza kely ary efa ny marary te hikarakara azy.
Voalaza fa ankoatra ny fanomezam-pahasoavana fanasitranana dia misy hafa nomena azy, toy ny fanomezana ny fiteny ary na ny fanomezana manidina.
Ny vavaka ho an'i San Martín de Porres ho an'ny biby
Isaorana anie ianao, Andriamanitra Mahery, Mpamorona ny zava-manan'aina rehetra.
Tamin'ny andro fahadimy sy fahenina niforonanay dia namorona trondro tao anaty ranomasina ianao, vorona eny amin'ny habakabaka ary biby eto an-tany.
Nahazo aingam-panahy an'i San Martín de Porres ianao mba hihevitra ny biby rehetra ho rahalahiny sy anabaviny. Mangataka aminao izahay mba hitahy io biby io.
Amin’ny herin’ny fitiavanao, avelao hiaina araka ny fanirianao ny [biby].
Midera mandrakariva amin'ny hatsarana rehetra noforoninao. Isaorana anie ianao, Andriamanitra Tsitoha, amin'ny zavaboary rehetra!
Mivavaha am-bavaka amin'ny Saint Martin de Porres ho an'ny biby manana finoana.
Mangataha ny fahasalaman'ny sakafonay fihetsika feno fitiavana izany izay heverin'ny olona maro fa fandaniam-potoana fotsiny.
Ny biby fiompinay sy ireo izay ao anaty làlana an-dalambe, na inona na inona fireneny na biby, samy manana mpanampy ao San Martín de Porres izy ireo izay afaka manome azy ireo ny fahasalamana ka hanana fiainana salama.
Vavaka ho an'i San Martín de Porres ho an'ny marary
Ry San Martin de Porres malala.
Fahazavana ny fanetren-tena sy masina amin'ny finoana lehibe, ho anao izay nomen'Andriamanitra hanao fahagagana tsy takatry ny saina, anio no nahatongavako anao amin'ity mila sy alahelo izay manarona ahy.
Aoka ho mpiaro ahy sy dokotera, mpanalalana sy ho mpampianatra ahy amin'ny lalan'ny fitiavana an'i Kristy.
Ianao izay tia an ’Andriamanitra sy ny rahalahinao, dia tsy nitsahatra nanampy ireo sahirana, hany ka fantatra fa nomen’Andriamanitra anao ny hery hahatongavana ho fotoana mitovy aminy, any an-toerana samihafa, henoy ireo izay mankasitraka ny hatsaram-panahinareo noho ny fitiavan’i Kristy.
Matoky ny firaisana mahery ataonao amin'Andriamanitra aho, ka mifona eo anatrehan'ny Tompo, fa eo alohan'ny fanahy madio toa anao dia tsara daholo ny heloko ary havela hiala amin'ny faharatsiana aho.
Ampahafantaro ahy ny fanahinao feno fitiavana sy fanompoana ataonao mba hanompoako tamim-pitiavana anao ho an'ny rahalahiko sy hanaovan-tsoa.
Izay hitako fa ianao, ahoana, manao soa amin'ny hafa, maivamaivana amiko ny alaheloko.
Enga anie ny ohatra manetry tena ataonao amin'ny fanananao ny tenanao, lalandava amin'ny toerana farany, ho fahazavana mba tsy hanadino ahy fanetren-tena.
Enga anie ny fahatsiarovanao ny finoanao lehibe, izay mahay manasitrana, mitsangana ary manao fahagagana maro be, ho ahy, mandritra ny fotoana fisalasalana, fahasoavana maharitra izay mameno ny foko amin'ny afon'ny fitiavana tsy misy fepetra an'i Kristy.
Ry Ray any An-danitra, amin'ny alàlan'ny fahamendrehan'i Saint Martin mpanomponao mahatoky, ampio aho amin'ny olako ary aza avela ho mikorontana ny fanantenako.
Ry Jesosy Kristy Tomponay izay nilaza "mangataha dia hahazo ianao", mangataka aminao amim-panetren-tena aho fa amin'ny alalàn'i Saint Martin de Porres no ahafahanao mandre izany fiangaviana izany.
Mangataka avy amin'ny fitiavana aho, omeo ahy ny fahasoavana angatahiko raha toa ka mahasoa ny fanahiko izany.
Mangataka izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika aho.
Io vavaka ataon'i Saint Martin de Porres ho an'ny marary io dia mahagaga!
Mandehana foana amin'ny aretina iray Iray amin'ireo dingana sarotra indrindra izay iainan'ny zavamananaina rehetraAmin'ny olombelona dia mitovy amin'ny fahafatesana izany satria ny aretina maro tsy misy fanasitranana ara-tsiansa.
Na izany aza, misy fitaovam-piadiana mahery vaika izay ny finoana izay miasa amin'ny alalan'ny vavaka.
Azonao atao ny mangataka fanasitranana amin'ny aretina rehetra amin'ny fotoana rehetra, ny olo-masina ary indrindra ny San Martín de Porres dia vonona ny hanampy antsika ary hanome antsika ny fanasitranana ny vatantsika na ny olona ao amin'ny fianakaviana na namana iray mila ny fahagagana.
Ny vavaka dia azo atao amin'ny fotoana rehetra na inona na inona toerana na toerana.
Ny olona sasany dia mazàna manao alim-pianakaviana izay mamorona vavaka amin'ny maraina sy mandritra ny andro, ny fianakaviana izay miara-mivavaka dia aleony manao izany mandritra ny sakafo maraina, ary manome antoka ny andro iray izay voatahy sy arovana.
Manaova fehezanteny amin'ny nova na mivavaka ny sapile San Martín de Porres feno dia mety ho fahasamihafana mahita fahagagana amin'ny fiainantsika.
Fa izany rehetra izany dia tokony hatao raha mino fa hihaino antsika mandrakariva izy, raha tsy izany dia handany fotoana fotsiny isika satria tsy ho tonga eo amin'ny tafon-trano ny vavaka.
Fitaovam-piadiana mahery vaika izany fa ny fahafantarana ny fampiasana azy ary mihoatra ny zava-drehetra dia tadidio foana ny misaotra ny fahagagana nomeny antsika.
Manantena aho fa mahita ny fanampiana ilainao amin'ny vavak'i San Martin de Porres.
Ny vavaka ho an'i Saint Helena
Vavaka mafy ho an'i San Alejo